ရခိုင့်အတွေးအခေါ်: အခြေခံ ယုတ္တိဗေဒ သင်ခန်းစာ
အခြေခံ ယုတ္တိဗေဒ သင်ခန်းစာ
အဂု အခြေခံ ယုတ္တိဗေဒ သင်ခန်းစာကို စလားပါမေ။
ကျနော်ရို့ အာရှတိုက်သားတိ အားလုံးကို အနောက်တိုင်းသားတိက ယုတ္တိဗေဒမှာ ကောင်းအားနည်းရေလို့ ဝေဖန်ကတ်ပါရေ။ ရခိုင်သားတိကိုတော့ခါ ဇာပိုင်ဝေဖန်ကတ်မေလေ မသိပါ။
အရင်ခေါက်က ဂရိမြို့ ပြနိုင်ငံတိမှာ ပညာတတ်သော လူငယ်တိုင်းသည် ဘာသာရပ်ကြီး သုံးရပ်ကို သင်ယူကတ်ရရေလို့ ဆိုပါရေ။
ယင်း ၃ ဘာသာက
သူရို့ အိ Logic မှာ form ဆိုပြီးကေ ထားဟိပါရေ။ Form မှန်ကေ valid ဖြစ်တေလို့ ဆိုပါရေ။ Form မှန်ကေလေ့ Fact က မှားနိုင်ပါသိမ့်ရေ။
Form လေ့မှန် Fact လေ့မှန်မှ Sound ဖြစ်တေလို့ သတ်မှတ်ပါရေ။ Form မှားကေ invalid. Fact မှားမမှား ကတော့ အတွေးအခေါ် ပညာရှင်တိ အိ အလုပ်ဖြစ်ပါရေလတ်။
Form နန့် Fact နှစ်ခုထဲက တစ်ခုခု မှားကေ Unsound ဖြစ်တေလို့ ပြောပါရေ။ ကိုင်းရှင်းပြနီကေ စကေ ရှုပ်ဖို့ ။ ဥပမာချေ နန့် ကြည့်မှ မြင်သာပါလိမ့်မေ။
၁. မှန်ကန်သော Form ပုံစံတစ်ခု
ထို့ ကြောင့် သူသည် မိန်းမ ဖြစ်သည်။
လွယ်ကူသော Fact ကို ပြပြီးကေ ဥပမာ ပီးထားလို့ မြင်သာပါသည်။
ဒေနေရာမှာ ပထမ ၀ါကျမှာ ပါသော အချက်အလက် (Fact) သည် မှန်သည်။
ဒုတိယ ၀ါကျမှာ ပါသော အချက်အလက် (Fact) သည်လည်း မှန်သည်။
အချက်အလက်များကို တင်ပြသော Form သည်လည်းမှန်သည်။
ထို့ ကြောင့် အဂုပြသော ပုံစံကို မှန်ကန်သည် (Sound) ဟု ကောက်ချက်ချသည်။
၂။ မမှန်သော ပုံစံ တစ်ခု (unsound form)
၀မ်းကြီးသောသူ သည် မိန်းမဖြစ်သည်။
ထို့ ကြောင့် သူသည် ၀မ်းကြီးသည်။
ဗုန်းခနဲကြည့်ကေ မှန်ချင်ချင်။ မမှန်ပါ။ ပထမ အချက်က မှန်ပါသည်။ ဒုတိယ အချက်ကို စီစိုင်ပုံ မမှန်ပါ။ ထို့ ကြောင့် ကောက်ချက်လေ့ မမှန်ပါ။
ပထမ ပုံစံ - ၀မ်းကြီးသည်ကို P လို့ မှတ်ပါ။ မိန်းမကို W လို့ မှတ်ပါ။
ဆိုကေ ပုံစံက ဒေပိုင်ထွက်လာပါရေ။
Subject is...... P.......
So, subject is...W
မှတ်ထားဖို့ စွာက PPW ဒေါင်လိုက်တန်းကို မှတ်ထားပါ။ သင်ချာ ဆန်ပါရေ..ပုံသီမှတ်ထားမှ ရပါဖို့ ။
So, subject is...P
ဒေချင့်က မှားပါရေ။ ဇာဖြစ်လို့ လေးဆိုကေ.. PWP ဖြစ်နီလို့ ပါ။ အမှန်က PPW ဖြစ်နီရဖို့ စွာ။
အေလောက်ဆိုကေ နားလည်ဖို့ ထင်ပါရင့်။ အေဟင့်က လောဂျစ် ဖြစ်လို့ ပုံသီမှတ်ရပါရေ။ ကျနော်ရို့အရှိတိုင်းသားတိက ပုံသီမှတ်ရစွာကို မကြိုက်။ စိုင်းစားရစွာကို ကြိုက်တေ။ ဆိုစွာ အတွေးအခေါ်ပိုင်း အရ တနားက ဖော်ပြထားရေ ပုံစံတိကို စိုင်းစားကြည့်ကတ်ပါမေ။
၁. ၀မ်းကြီးသောသူသည် မိန်းမဖြစ်သည်။......အိုကေ၊ အဆင်ပြေပါရေ။
သူသည် ၀မ်းကြီးသည်။.....အိုကေ...သူသည် မိန်းမ မဖြစ်နိုင်စရာ မဟိပါရာ။
ထို့ ကြောင့် သူသည် မိန်းမဖြစ်ပါသည်။ (မှတ်ချက်..သူ ကို မမအတွက်ပါ ယောက်ျားအတွက်ပါသုံးရေ လို့ မြန်မာသဒ္ဒါမှာ သင်ရပါရေ)
၂. ၀မ်းကြီးသောသူ သည် မိန်းမဖြစ်သည်။ ....အိုကေ...နိုးပရောဗလမ်။
ထို့ ကြောင့် သူသည် ၀မ်းကြီးသည်။..........ကောက်ချက်ချစွာ မှားလားပါရေ။ မိန်းမဖြစ်တိုင်း ၀မ်းကြီးစွာက မဟုတ်ပါ။
အေနေရာမှာ ပြောချင်စွာက အဂု ဥပမာသည် တဗျင်းရရိုး ရှရှင်းချေပါ။ အမှားကို မြင်ရဖို့ လွယ်ကူပါရေ။ တွေးခေါ်ရုံနန့် အမှားကို မြင်နိုင်ပါသိမ့်ရေ။ အချက်အလက်ကို အလွယ်တကူ စိုင်းစားရုံ နန့် အမှားအမှန်ကို အလွယ်တကူ မမြင်နိုင်ရေ အချိန်မှာ ယုတ္တိဗေဒ Form ပုံစံကို သုံးပြီးကေ အမှားအမှန်ခွဲခြား လားနိုင်ပါဖို့ ။ ထို့ ကြောင့် PPW ကို သတိရပါ။ ဒုတိယပုံစံကို English ပိုင် Fallacy လို့ ခေါ်ပါရေ။ မှန်ယောင်ယောင်နန့် မှားစွာမျိုးပါ။
အရာပုံစံ နှစ်မျိုးကို ပြလားပါမေ။ ယုတ္တိဗေဒ အခြေခံမှာ ပုံစံ ဒေ ၄ မျိုးရာ ဟိမ့်ပါရေ။ ယင်းလေးမျိုးကို သုံးပြီးကေ စကားကို ရွမ်းရွမ်းဝေအောင်ပြောနိုင်သော လူများ၏ အမှားကို ဖမ်းနိုင်ပါလိမ့်မည်။ စကားဆိုစွာ ရှုပ်ရှုပ်နန့် ကျအောင်ပြောကေ ကျလားတတ်လို့ အမှားဖမ်းချင်ကေ ပုံစံလေးမျိုးကို သတိရပါ။
၃.၀မ်းကြီးသောသူ သည် မိန်းမဖြစ်သည်။
သူသည် မိန်းမ မဟုတ်ပါ။
ထို့ ကြောင့် သူသည် ၀မ်းမကြီးပါ။ ......အိုကေ၊ မှန်ပါရေ။ ဒေပုံစံကို Negative ပုံစံလို့ မှတ်ထားပါ။
မှတ်ထားဖို့ က P NotW NotP.
၄. ၀မ်းကြီးသောသူ သည် မိန်းမဖြစ်သည်။
ထို့ ကြောင့် သူသည် မိန်းမ မဟုတ်ပါ။ .....မမှန်ပါ။ ၀မ်းမကြီး ကေဗင် မိန်းမ မဟုတ်ရရာလာ။
ဆိုကေ ဒေလောက်ရိုးရှင်းရေ အချက်အလက်ချေကို တောင် ဇာမှန်လို့ ဇာမှားလေ မနည်းစိုင်းစားယူရကေ... ရှုပ်ထွီးရေ အကြောင်းအရာတိ ဆိုကေ ခေါင်းခဲကျလားပါဖို့ ။ ယင်းတွက်တာနန့် ပုံစံချေတိကို ရာ မှတ်လို့ ထား။ ပုံစံချေနန့် တိုက်ကြည့်ပြီးကေ အမှားအမှန် ခွဲခြားလားပါ။
ပုံစံ အမှန် နှစ်ခုကို ပြန်ပြောပြပါမေ။
PPW နန့် P NotW NotP ဖြစ်ပါရေ။
ရခိုင်သားတိ ယုတ္တိကျကျ စိုင်းစားနိုင်ကတ်ပါစီ။
ပြောရဖို့ စွာက.. ရခိုင်သားတိ ယုတ္တိကျကျ တွက်ချက်နိုင်ကတ်ပါစီ။